Wakaaladaha Socdaalka iyo Dalxiiska ee Talyaanigu waxay codsanayaan in laga caawiyo COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Wakaaladaha Socdaalka iyo Dalxiiska ee Talyaanigu waxay codsanayaan in laga caawiyo COVID-19
Jebinta Wararka Safarka • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Madaxa Xiriirka Wakiilada Socdaalka iyo Dalxiiska Talyaaniga Ivana Jelinic
Madaxweynaha Xiriirka Wakiilada Socdaalka iyo Dalxiiska Talyaaniga (FIAVET) Ivana Jelinic ayaa codsatay: “Dalxiiska ayaa ku jira dhibaato buuxda; faragelin deg deg ah oo ka socota Wasaaradda Dhaqanka iyo Waxqabadyada (MIBACT), MAECI Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga (MAECI), iyo Machadka Teknolojiyadda Massachusetts (MIT) -Italy waxaa laga codsanayaa saameynta Xaalada degdega ah ee COVID-19 iyada oo lagu taageerayo hawlwadeennada Talyaaniga ee qaybta.
"Khasaaraha aan ka filaynay waaxdeena ayaa ka sarreeyay wixii laga filaayay, jawaabo deg deg ahna waa loo baahan yahay," ayuu yiri Jelenic. Taariiqda taxanaha ee xaaladdu waxay ku tuuraysaa hawl wadeennada dalxiiska Talyaaniga xaalad aad u daran.
Laga soo bilaabo joojinta duulimaadyada u dhexeeya Talyaaniga iyo Shiinaha - iyo sanadka dhaqan iyo dalxiis hindise ee u dhexeeya Talyaaniga iyo Shiinaha oo hay'ado iyo shirkado ay maalgashadeen - oo ay weheliso amarka ku saabsan joojinta safarka ardayda ee ay abaabuleen iskuullada, dalxiiska iyo safarka Talyaanigu wuu qulqulayaa.
Sida ku xusan sharciyada Dalxiiska Dalxiisyadu, dugsiyadu waxay xaq u leeyihiin inay ka baxaan qandaraaska lagu xusay iyadoon la dalban ciqaab ayna helaan lacag celin buuxda oo ay sameeyeen wakiilada safarka iyo kuwa dalxiiska. Sida ku xusan qodobadan, wakaaladaha socdaalka waxay ka codsanayaan shirkadaha diyaaradaha inay dib u soo celiyaan duullimaadyada "sababo la xiriira caqabad la'aanta adeegsiga hawada."
Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha duulimaadyada shisheeye ayaa diidaya soo celinta lacagta. Rafcaanka uu bilaabay madaxweynaha Fiavet waa lagu guuleystay: Wasiirka Waxbarashada, Lucia Azzolina, waxay tiri "Waalidiinta ardayda waa loo celin doonaa laakin wakaaladaha socdaalka sidoo kale waxay u baahan yihiin jawaab."
Fiavet ayaa ku boorisay Wasaaradda Kaabayaasha iyo Gaadiidka (ENAC) iyo Ururka Cirka ee Caalamiga ah (IATA) inay taageeraan waajibaadka ka soo celinta duulimaadka ee shirkadaha duulimaadyada, si looga fogaado khilaafaadka sii murjin kara xaaladda.
Dhibaatooyin waa weyn ayaa ku soo kordhiyay xaaladan durba dhibaatada leh: burburka xirmooyinka fasaxa barafka ee Alps-ka Talyaaniga, joogsiga dalxiiska iyo safarka ganacsiga (joogitaanka munaasabada la baajiyay awgeed), iyo burburka rasmiga ah ee soo socda ee safarada dibada. .
Talyaanigu waa go’doon yahay
"Tirada dadka safarka ah ee tagaya Talyaaniga waa ay yaraadeen ugu yaraan, dalxiiskii baxayay ee Talyaaniguna wuxuu istaagay sababo la xiriira soo galitaankii uu ku tagi jiray meelo badan oo adduunka ah, taasoo dhalisay baajinta fasaxyadii xilliga gu'ga ee u dhawaa," ayuu yiri Madaxweynaha Fiavet. safarka socdaalka. ”
Fiavet, sidaas darteed, waxay ka codsaneysaa faragelinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga si kor loogu qaado wacyiga safaaradaha shisheeye ee Talyaaniga iyo sidoo kale danjirayaasha Talyaaniga, maxaa yeelay waxay kordhinayaan la-talinta safarka ee kahortaga safarka iyo ka-noqoshada Talyaaniga, taasoo abuureysa dhaawac weyn .
Fiavet waxay horeyba ugu yeertay miiska xaaladaha degdega ah ururada ganacsiga iyo wakiilada MIBACT si ay uga codsadaan xirmo tageero talaabooyinka ganacsiga dalxiiska labadaba xaga aragtida amniga bulshada iyo ka cafinta canshuuraha.
Madaxweynaha Jelinic wuxuu yiri: “Codsiyada waxay la xiriiraan mudada ay jirto xaalad deg deg ah ee caafimaad ee Talyaaniga. Gaar ahaan, waxaa loo baahan yahay in la joojiyo bixinta canshuuraha shaqaalaha ee wakaaladaha socdaalka ama hawlwadeenada dalxiiska, halka mushaharka la sii wadi doono in la siiyo shaqaalaha isla markaana karantiil loola dhaqmo sidii muddo jirro. Fiavet sidoo kale waxay codsatay qorshe shaqo ka fariisin ah.
Marka laga fiiriyo aragtida maaliyadeed, Federaalku wuxuu codsanayaa in laga joojiyo shirkadaha canshuuraha u hogaansanaanta waajibaadka dalxiiska iyo in Gobolka uu qaado bixinta canshuuraha la xiriira muddada canshuurta ee 2020 ee Degmooyinka ay khuseyso oo ay ku jiraan kuwa la xiriira bixinta canshuuraha laga reebay.
Intaas waxaa sii dheer, Fiavet waxay jeclaan laheyd inay aragto eberka sicirka IRAP (canshuurta gobolka ee talian ee waxsoosaarka waxsoosaarka) ee laxiriirta xilliga canshuurta 2019, ee cashuur bixiyeyaasha qiimaha waxsoosaarkooda, saafiga wax kale oo laga jaro, uusan ka badneyn € 200,000, oo ka sareysa taas oo codsigu yahay waa kalabar 50%.
Fiavet waxay codsaneysaa in gobolka uu mas'uul ka noqdo bixinta IMU iyo TARI ee laxiriirta muddada canshuurta 2020 ee dowladaha hoose ee ay khusayso.
"Aad ayey muhiim noogu tahay inaan dhaqaajino shabaqadaha badbaadada bulshada iyo ka dhaafida canshuuraha si aan u noolaano shirkadaha," ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Madaxweynaha Fiavet. “Go’aan kasta wuxuu leeyahay cawaaqibkiisa iyo dhaawaca dhaqaale ee xulashooyinka la sameeyay, iyo sumcadda adduunka; tani kuma dhici karto ganacsiyada iyo muwaadiniinta - waa in loo ilaaliyo caafimaadka iyo shaqada labadaba. ”